नेपाल इन्सुरेन्सको १००% हकप्रद खुल्दै, कहाँ जाने भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » नेपाल इन्सुरेन्सको १००% हकप्रद खुल्दै, कहाँ जाने भर्न ?
काठमाडौं - बैशाख ५ गतेदेखि नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको १००% हकप्रद बिक्री खुला हुने भएको छ । कम्पनीले १ः१ अनुपातमा ३० लाख १९ हजार ८८६.१० कित्ता सेयर जेठ ८ गतेसम्म बिक्री गर्न लागेको हो । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक एनआइबीएल एस क्यापिटल लाजिम्पाटसहित लालदरबार काठमाडौं, लगनखेल ललितपुर तथा चिप्लेढुंगा पोखरा शाखाबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नेपाल इन्सुरेन्सको कमलादी कार्यालयसहित सम्पूर्ण शाखाबाट पनि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था छ । यसैगरी, आस्वाबाट पनि हकप्रद भर्न सकिनेछ । हाल यस इन्सुरेन्सको चुक्ता पुँजी ३० करोड १९ लाख ८८ हजार ६१० रुपैयाँ छ ।